Armenia: Tohana Vaovao Ho An’ireo Tratry Ny Herisetra An-tokantrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2011 12:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, عربي, Italiano, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Olana tsy azo noresahana nandritry ny fotoana ela ny herisetra an-tokantrano teo anivon'ny fiaraha-monina Armeniana. Fa tamin'ny vono nahafaty an'ilay renim-pianakaviana 20 taona, Zaruhi Petrosyan, nataon'ny vadiny sy ny rafozany taminy ny volana Oktobra lasa teo, dia nahasintona olona sy fikambanana maro ity resaka ity, izay mihatra amin'ny mihoatra ny iray ampahefatry ny vehivavy ao Armenia.
Nahateraka ny Coalition to Stop Violence Against Women in Armenia na Fiombonana Hampiato ny Herisetra amin'ny Vehivavy ao Armenia ny raharaha, fikambanana misy mpikambana fito izay nanaraka ny raharaha Petrosyan sy niasa mba hampiova ny fehezan-dalàna mikasika ny herisetra an-tokantrano. Miaraka amin'ny Women's Resource Center (Ivontoerana Fanovozana ho an'ny Vehivavy), ny Society Without Violence (Fiarahamonina Tsy Misy Herisetra) sy ny PINK Armenia (Armenia Mavokely), ny Tufenkian Foundation (Fondation Tufenkian) dia niditra tao amin'ny fiombonana ary miara-miasa ankehitriny amin'ny Armenian International Women's Association (Fikambanana Iraisampirenen'ny Vehivavy Armeniana) sy ny USAID manampy ny Ivontoerana ho Fanohanana ny Vehivavy izay mikaroka famatsiam-bola vaovao amin'izao fotoana mba hanokafana toeram-pialofana ho an'ny vehivavy iharan'ny herisetra any Armenia.
Niresaka tamin'ny Tale nasionalin'ny Tufenkian, Mary Matosian, izahay tany Los Angeles tamin'ny volana Septambra teo mikasika ny fanamby sy ny tanjon'ny tetikasa
Zaruhi Petrosyan, renim-pianakaviana tanora matim-bonon'ny vadiny sy ny rafozany tamin'ny taona lasa/Sary natolotry ny fianakaviany tamin'ny alalan'ny News.am
Global Voices (GV): Inona avy izao ny asa efa vitanareo mikasika ny herisetra an-tokantrano ao Armenia hatramin'izao?
Mary Matosian (MM): Nanonta sary sy taratasy fanelezam-baovao izahay ary nizara azy ireny. Tsy mora ny nanao izany satria nirinay hapetaka tamin'ireny toerana fampielezam-baovao misy fitaratra ireny ireo, ka ny sasany nanaiky ary ny sasany tsia. Navoakanay tamin'ny fahitalavitra [on television] ny nomeraonay ka niantso anay ny olona manerana ny Armenia. Nampianatra fomba fanabeazana mahomby izahay, maro amin'ny vehivavy no mbola mikapoka ny zanany, ka manjary lasa fantsona mampitohy ny herisetra ny ankizy. Maro tamin'ireo vehivavy no tsy nahafantatra akory fa olana izany satria izany no hitany hatramin'izay tao amin'ny fianakaviany ka nataony fa izany no fitaizana araka ny tokony ho izy. Niaraka tamin'ny masoivoho Anglisy dia nanao fandaharana ihany koa izahay ho fanofanana ny mpanao gazety, nanazava tamin'izy ireo ny tena atao hoe herisetra an-tokantrano, sy ny fomba fanadihadiana an'ireo niharan'izany.
GV: Ahoana ny fomba hanovanareo ny fomba fandraisan'ny olona ny herisetra an-tokantrano ao Armenia?
MM: Mila ampianarina ny olona amin'ny sokajiny rehetra, ny ao amin'ny fitondrana, ny mpampianatra, ny mpitsabo. Raisintsika ohatra ny fanazarana nataonay tamin'ny mpampianatra. Vehivavy ireo, ary mafy vava tsy nety niresaka momba an'io lohahevitra io mihitsy, tsy nety nanaiky. Na ireo vehivavy aza dia mbola tsy vonona ny hihevitra ny mahasoa azy. Mitondra anjara asa lehibe amin'io ny fikambanana iraisampirenena, sy ireo teratany monina any ivelany. Satria raha ny ao anatiny dia tsy hisy fiovana eo na hikiaka sy hidradradradra toy inona aza isika. Rehefa manosika ny raharaha ny any ivelany vao manomboka misy mihetsika ry zareo. Tokony manomboka manova ny fepetran-dalàna isika. Manan-danja be ho an'ny fiarovana ny tra-doza sy ho an'ny fanasaziana ireo meloka ny lalàna.
Teratany Armeniana any Los Angeles nanohana ny hetsik'ireo mafàna fo tany Armenia tamin'ny fanaovana diabe tany ampiandohan'ity taona ity mba hanoherana ny herisetra an-tokantrano. Sary avy amin'i Liana Aghajanian
GV: Fa manan-danja toy inona io lohahevitra io no tokony hoheverin'ireo tsy Armeniana?
MM: Olana iraisampirenena ny herisetra an-tokantrano. Mahazo fanohanana ara-bola avy amina fikambanana tsy misy akory ao Armenia izahay. Ny firaisan-kinan'ny vehivavy manerana izao tontolo izao ho fampahafantarana ny olana mahazo ny vehivavy sy ny fiarovana azy ireo dia iraisan'ny rehetra, tsy misy sisintany. Amin'ny alalan'ny aterineto isika izao dia afaka mifandray tsara sy mizara traikefa amin'ny Armeniana aryy milaza aminy ny fomba fisehon'ny olana any Afrika, sy Amerika Atsimo ary ny toerana hafa eran'izao tontolo izao, ny fomba niatrehan-dry zareo ny olana – ahafahany misintona hevitra izany.
GV: Ary ny momba ireo fanehoan-kevitra milaza fa iharan'izany ihany koa ny lehilahy, manana tetikasa ho an'ny lehilahy iharan'ny herisetra an-tokantrano ve ianareo?
MM: Tena misy lehilahy roa iharan'izany tokoa tafiditra ao amin'ny tetikasa. Nanana fianakaviana iray manokana izay izahay, nifamono avokoa ny mpihavana tao anatiny. Tsy afaka sahaninay avokoa ny zava-drehetra – misy karazany maro ny herisetra – mila mifantoka amina raharaha iray manokana, nefa misy ireo tranga hafa izay tsy maintsy hosahanina
GV: Manao ahoana ny hoavin'ny ady atao amin'ny herisetra an-tokantrano ao Armenia?
MM: Raha amin'izao fizotrany izao dia hamiratra ny ho avy. Satria raha mitohy manana rafitra tsara sy mahazo fanampiana ara-bola ary miasa mavitrika toy izao izahay, dia ho betsaka ny torohay azo aparitaka amin'ny manodidina. Na nahazo vokatra tsara aza izahay tamin'ny taona vitsivitsy lasa teo, dia mbola eo ampanombohana ity tolona ity. Raha raisina ohatra izao, ny teny hoe “féminisme” dia mivoy hevitra ratsy any Armenia. Mbola tokony manazava amin'ny olona isika, manazava amin'ny vehivavy ny zo ananany. Tsy mihevitra akory ireo vehivavy ireo fa manana olana. Mbola eto amin'ny dingana fanombohana mihitsy isika izao.
Mametraka foto-drafitr'asa ho an'ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano ihany koa ny fikambanana hafa ao amin'ny firenena. Ny volana Jolay teo, ny fikambanana ara-tsosialy Paros “Lighthouse” dia nanokatra trano fialofana vaovao sy toby ho an'ny vehivay any akaikin'i Yerevan, ho an'ireo renim-pianakaviana sy vehivavy miaraka amin'ankizy hatramin'ny 2 taona izay tsy misy toeran-kaleha sy iharan'ny herisetra. Hatreto io toby io dia efa nandray vehivavy telo, izay tonga nangataka ronono, fitafiana, lamban-jaza ary fitsaboana. Raha ny nambaran'i Seta Ghazarian, anisan'ireo nanangana ny tetikasa, dia mahazaka eo amin'ny vehivavy 16 mahery eo io toby io.
1 herinandro izayKazakhstan